Izincwadi ezihamba phambili ze-Biography
Kusukela Ngaphakathi, nguMartin Amis
Imibhalo njengendlela yokuphila kwesinye isikhathi iqhuma ngomsebenzi oma emngceleni wokulandisa, okungamahlalakhona kanye nomlando wokuphila kwabantu. Futhi lokho kugcina kuwumsebenzi oqotho kakhulu wombhali oxuba ugqozi, izinkulumo, izinkumbulo, okuhlangenwe nakho ... Lokho nje uMartín Amis asinikeza kona ...
Ama-Escombros, kaFernando Vallejo
Yonke into isengozini yokuwa. Ngaphezu kwalokho, impilo yomuntu munye ivimbela ukuqhuma kweminyaka okulawulwayo. Bese kuba khona imfucumfucu, lapho izinkumbulo ezibalulekile ezingazange zitholakale ngesikhathi. Ngoba phela, ayikho inkumbulo egcina ukuthinta noma izwi nge ...
ILangabi Elingafi nguStephen Crane nguPaul Auster
IWild West, njenge-synecdoche yezwe laseMelika ekwakhekeni, yanweba ukucabanga kwayo, ubuhlakani bayo nezinhlobo zayo ezweni lonke elikhulu lokuzwela kanye nezinkolelo ezingafani nakho konke. Akusoze kwabakhona okusolwayo okungaxakeki kangako ukuthi kuzokwakhiwa ezweni elifana nanamuhla ...
Uma ubheka emuva, nguJuan Gabriel Vásquez
Kukhona okungaphezu kwento eyingozi ngezinguquko zanamuhla. Cishe konke kungeniswa ezweni ukuba semthethweni kokugwetshwa kwalowo oqinisekisa lowo othule, noma ngabe ukuthula kuthula ekuthuleni, ekubhujisweni okuphambene nalokho. Ngakho-ke umuntu uphela, acwiliswe ebuningini, aqiniseke ngokuvuka ...
Killer Ladies: Lethal Women in History, nguTori Telfer
Lokho kubulala akunabulili akubuzwa. U-Oswald, umbulali onencwadi yakhe ethi The Catcher in the Rye ngaphansi kwengalo yakhe, noma iYork Ripper noma ngisho "The Wolf of Moscow" wayengafinyelela ezinsukwini zethu. Kepha yebo, kukhona nabesifazane abathanda ubugebengu obukhohlisa kakhulu ...
Abesifazane bomphefumulo wami, we Isabel Allende
Ukwazi ngekhanda indlela eya emthonjeni wokhuthazo, Isabel Allende kulo msebenzi uphenduka i-existential gibberish of maturity lapho sonke sibuyela kulokho okwakha ubuthina. Okuthile okungimangaza njengemvelo kakhulu futhi okufike ngesikhathi, ngokuhambisana nengxoxo yakamuva ...
Kuyafisa ukwazi ukuthi uma engekho umbhali obesemsebenzini, okungaba yincwadi ephazamisayo, ubukhazikhazi empilweni, kugcina sekuyivelakancane kwezinganekwane ngemuva kokufa kwakhe. Kepha futhi nendlela ephelele yabantu abavamile okungenzeka ukuthi abakaze bafunde umbhali okungasikho kudala washiya indawo ...
Ezingashi, nguJavier Moro
INew York iheha kakhulu uma uvakashela nje. Ngoba kungenye yezindawo ezimbalwa ezingagcini ngokulindela kepha zidlula nokuzidlula. Ikakhulukazi uma ungayithola nabangani abahle abahlala kuyo yonke inhliziyo yedolobha. Cha, i-NY ayiphoxi neze. Manje …
Umuntu wase-Ireland, nguCharles Brandt
Ekutakuleni enye yalezo zincwadi ezinhle ngaleso sikhathi ezazivele zinqobile e-United States kepha zashiyelwa ukusetshenziswa kwasekhaya kweYankee, uDe Niro wazibandakanya necebo elingelona elingelona elingelona iqiniso lokuthola leyo ngqangi yento ehehe izigidi zababukeli . Abalingisi…
USpy noMkhapheli, nguBen Macintyre
Selokhu yakhishwa ngoJuni 2019, le thriller yezobunhloli, enezilinganiso ezinkulu hhayi zeqiniso kuphela kodwa nezeqiniso, iphakathi kwabathengisa kakhulu uhlobo lwayo. Ungahlola LAPHA. Futhi kungukuthi isazi-mlando saseNgilandi nombhali wephephandaba uBen Macintyre ungungoti emlandweni omlando ongajwayelekile ...